အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်ကောက်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်ကောက်….	6
Posted by သျှားသက်မာန် on Sep 30, 2016 in Travel |6comments
ခုခရီးစဉ်လေးကတော့ဘန်ကောက်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပြီးတော့သွားချင်တဲ့အဖော်၃ယောက်ကိုတောင် Tour leader လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်
အရင်တစ်ခေါက်ကလို ရေဆာတဲ့ဒဏ်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်ခံပြီးသွားတဲ့သကာလ..ဒီတစ်ခေါက် Nok Airနဲ့ လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်တော့တယ်..
Nok Air ကbudgetလိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့်..လေယာဉ်ပေါ်မှာအဆာပြေ
တစ်ငုံသောက်ဖို့ ရေနဲ့ ကိတ်လေးတစ်ခုကျွေးတော့တော်သေးတာပေါ့။
မြန်မာလူမျိုးအများစုတည်းကြတဲ့…ဈေးလည်းသက်သာတဲ့ Tuldis towerပါ။
ရှော့ ပင်ထွက်လိုထွက်ငြား..MBKလည်းသွားလိုက်ပါသေးတယ်..မွန်လေးတို့သွားတာလည်းနောက်ကျတော့တချို့ ဆိုင်တွေဆိုပိတ်လို့တောင်နေပါပြီ..မြေညီ
မှမြန်မာစကားသံလည်းကြားရော.ထပ်လျှော့ ပေး ပါမယ်..ထပ်လျှော့ ပေးပါ
ညစာအနေနဲ့ ကတော့Food Court မှာပဲဝယ်စားလိုက်ပါတယ်…သူကအရင်ဦး
အပြင်ထွက်တာနဲ့ လမ်းမှာမနက်စာကိုသွပ်လိုက်ပါတယ်။မွန်လေးတို့ တည်းတဲ့
လေးနဲ့ ကိတ်လေးနဲ့ မနက်စာကိုဖြည့်လိုက်တာပေါ့။
အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဖောက်သည်အနေနဲ့ ပြန်ရောင်းချင်ရင်တော့ဒီရှော့ 
ကနေSky train စီးသွားရင်၅မှတ်တိုင်မြောက်ဆိုဒီဈေးကိုရောက်ပါတယ်..
မွန်လေးတို့နောက်နေ့ မှာဖူးခပ်ကိုလေယာဉ်နဲ့ ပဲသွားလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်လေးနဲ့ ဆိုတော့လူသက်သာတယ်..အပေါ်စီးကနေ..ပင်လယ်ထဲကကျွန်းလေးတွေကိုရှုစားလို့ရတာပေါ့..ကြာချိန်ကတော့1နာရီနီးပါးပါ။.အဲ့ဖက်ကိုတော့အသင့်စောင့်နေတဲ့ဂိုက်နဲ့ ကားကစောင့်နေပြီးဟိုတယ်ကိုပို့ ပေးပါတယ်..
ဖူးခပ်လေဆိပ်ကနေဟိုတယ်ကိုရောက်ဖို့ ၄၅မိနစ်လောက်သွားရပါသေးတယ်..မွန်လေးတို့ ကမြို့ ထဲဟိုတယ်မတည်းပဲ..ပင်လယ်နားကPatong Beach ဟိုတယ်ကိုတည်းတာလည်းပါပါတယ်..(ပင်လယ်ကြီးကိုအပြည့်အ၀ခံစားချင်တာလည်းပါတာပေါ့)
ဖူးခပ်မှာ Beach တွေ၃၅ခုရှိတဲ့အထဲကလူအများrecommendပေးကျတဲ့
beach ကမွန်လေးတို့ သွားခဲ့တဲ့Patong Beachပါပဲ…သူရဲ့ Night lifeက
တတ်တဲ့သူတွေသွားရင်လည်းအရမ်းကိုမိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့..အခြောက်မတွေနဲ့ လည်းပိုက်ဆံပေးပြီးselfie ဆွဲလို့ရပါသေး။..နာမည်ကြီးရှော့ပင်းမောလ်Jungceylonကြီးကလည်းရှိတော့..ဈေးဝယ်လို့ကလည်း
ဖူးခပ်မှာညစာသွားစားရင်တော့ဆိုင်တွေထက်လမ်းဘေးက..စားသောက်ဆိုင်မှာစားတာပိုအရသာရှိပါတယ်..ပင်လယ်စာတွေလည်းအစုံအလင်ကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ စားလို့ရပါသေးတယ်။တချို့ အလုပ်သမားလေးတွေကမြန်မာ
နောက်နေ့ ဒွေးနဲ့ ထက်ထက်တို့ မီကိုကော်ဖီကြော်ငြာတဲ့ကျွန်းရှိရာကိုသွားဖို့ ကား
ပါတယ်..အဲကွန်လေးနဲ့ အေးနေတာပဲ..VIP roomတွေလည်းရှိတော့အမြင့်ဆုံး
VIP room မှာဘတ်၅၀၀ထပ်ပေးပြီးကျွန်းကိုရောက်ဖို့ ရှိအနားယူခဲ့ပါတယ်။အ
မြင့်ဆုံးVIP room ယူရင်မုန့် တို့ အအေးတို့ ကြိုက်သလောက်ဖရီးသောက်လို့
ရလို့VIP room အမြင့်စားပဲယူကြပါလို့။
ထောင်ပြီးရေငုပ်စမယ့်အချိန်၊နေလည်စာစားမယ့်အချိန်၊သင်္ဘောကြီးဆီပြန်သွားမယ့်အချိန်၊ဖူးခပ်ကိုပြန်သွားမယ့်အချိန်ဆိုပြီးပြပါတယ်။မွန်လေးတို့ အဖွဲ့ ထဲမှာမွန်လေးပဲရေငုပ်မယ့်သူပါတော့..ကိုယ်ပဲရေငုပ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးသူတို့ ခေါ်ရာ
ဦးကြောင်ကြီး says: သျှားကိုစားခြင်
နွားပျို လားထင်
စကားချို နားရွှင်..
Foreign Resident says: အမှန်ပြောရရင် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် ၊
” ဘန်ကောက်ခရီးသွားမှတ်တမ်း ( ပထမအကြိမ် ) ” ထဲကပုံ နှင့်
အခု ” အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်ကောက် ” ထဲကပုံ နှင့်
ကိုယ်လုံး တော်တော် ကွာသွားပြီဘဲ ။
kai says: http://mandalaygazette.com/226303
Thint Aye Yeik says: သွားချင်စရာတော့ ကောင်းသားနော့
၁၄ ရက်အတွင်းဆို ဗီဇာတောင် ယူစရာ မလိုတဲ့နိုင်ငံ ဆိုတော့. . .
ခက်တာက လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးနဲ့ ပါတ်စပို့ မရှိသေးတာ
သျှားသက်မာန် says: လေယာဉ်ကလည်း ခုဆိုဘတ်ဂျက်လိုင်းတွေရှိနေပါပြီအသွားအပြန်မှ70 75 ပဲရှိပါတော့တယ်..ပတ်စ်ပို့ ကလည်း1ပတ်ဆိုရပါပြီ29500လောက်ပဲကျပါတော့တယ်..တော်တော်လွယ်သွားပါပြီ
သျှားသက်မာန် says: Foreign Resident >> ဟုတ်ပါတယ်..ပိုလည်းလှလာတယ်လည်းလုပ်လိုက်စမ်းပါ……………အဟက်ဟက်…